ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင်၊(Jul 2012) ကောင်းကင်၌ဆုလပ်များခံစားဖို့ - ဦးတင်မောင်ထွန်း (Rev, Dr)
ကောင်းကင်၌ဆုလဒ်များခံစားဖို့ - ညီအစ်ကိုကြီးဦးတင်မောင်ထွန်း
အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ကူးမြောက်သောသူ - ညီအစ်ကိုဦးကပ်ခန့်ခုပ်
ဇာတိသဘောကို ငြင်းပယ်၍ - ညီအစ်ကိုဦးထန်ကျင့်လန်
Read more: ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြုစာစောင်၊(Jul 2012)...
ဇွန်လအတွက် နေ့စဉ်ခွန်အားများကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - မုရန်
လူအချို့က ဆရာဝန်ထံ မသွားလို။ သူတို့အထဲ၌ ယိုယွင်းနေသောအရာကို မသိလိုသော ကြောင့်ပါ။ လူအချို့တို့ ဘုရားကျောင်း မတတ်ရသည့်အကြောင်းမှာ ထိုသဘောအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်။ သို့သော် မိမိ၏ရောဂါကို လျစ်လျူရှုခြင်းခြင်းဖြင့် ကျန်းမာလာမည် မဟုတ်ပါ။ အပြစ်ကို လျစ်လျူရှုခြင်းမှာလည်း
Read more: ဇွန်လအတွက် နေ့စဉ်ခွန်အားများကို...
တခါက အလုပ်ခေါ်တဲ့ အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ လူနှစ်ယောက်ကို မေးမြန်းပါတယ်။ လူတယောက်ကတော့ အတွေ့အကြုံ ၂၅ နှစ် လောက် ရှိပြီး နောက်တယောက်ကတော့ ၂ ခန့်သာ အတွေ့အကြုံသာ ရှိပါတယ်။ အင်တာဗျူးပြီးသွားလို့ တကယ်အလုပ်ခန့်တဲ့ အခါ ၂ နှစ်အတွေ့အကြုံသာ ရှိသေးတဲ့ လူကို အလုပ်ရှင်က ခန့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမှာတင် ၂၅နှစ်
Read more: ၀ိညာဉ်ရင့်ကျက် ရှေ့သို့တက်
သူ့အမှုအရာကိုအချင်းချင်းရှုမှတ်ကြပါ - ညီအစ်ကိုကြီး ဦးတင်မောင်ထွန်း
ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသော သူမည်သည်ကား၊ ဒုစရိုက်ကိုမပြုတတ်။
၁ ယော ၃း၉
ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသောသူ ဆိုတဲ့ အသုံးအနူန်းမျိုးဟာ ကျမ်းစာထဲမှာ အခြားနေရာများမှာလည်း တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီအသုံးအနူန်းဟာ သာမာန်နှစ်ခြင်းခံပြီးတဲ့ လူတယောက်ကို မဆိုလိုပါဘူး။
Read more: ဘုရားသခင်ဖြစ်ဘွားစေတော်မူသော သူမည်သည်ကား
စစ်တွေမြို့ရောက်သော JBCS Singapore မစ်ရှင်အဖွဲ့
စစ်တွေမြို့နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ရောက်ရှိသော JBCS သင်းအုပ်နှင့်အဖွဲ့ May 2012
မစ်ရှင်ဆိုသည်မှာ .. ခရစ်တော်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေသည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ အသင်းတော်များ နည်းမျိုးစုံဖြင့် မစ်ရှင်အလုပ်ကို အားပေး၊ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မစ်ရှင်ရှိပါမှ အသင်းတော် နိုးကြားမှုရှိသည်ဟု ယေဘူယမှတ်ယူထားကြပါသည်။ အများအားဖြင့်
Read more: စစ်တွေမြို့ရောက်သော JBCS Singapore မစ်ရှင်အဖွဲ့
ရွှေလင်းယုန်မောင်နှံ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း - ဆရာတော်လတ်ယေရှဲ
လတ်ယေရှဲ (Rev. Dr)
ရွှေလင်းယုန်ကဲ့သို့ (ထွက် ၁၉း၎၊ ယောဘ ၁၂း၇-၉) Dancing together with American friends, playing super bowl, hunting, Hawaii, sky driving, wave surfer ... etc.. I wish to write Eagale story about how Egale couple love. Valentine Month (Feb)...
အမေရိကန်များ မိတ်ဆွေများနဲ့ အတူကခုန်ခြင်း၊ စူပါဘိုးလ် ဘော်လုံးပွဲကြည့်ခြင်း၊ အမဲလိုက်၊ ဟာဝိုင်ရီသွား၊ လေဟုန်စီးခြင်း၊ ရေလွှာလျောစီးခြင်း၊ ရေခဲစကိတ်စီးခြင်း စတဲ့ ပျော်စရာများစွာ ကစားနေကြတဲ့အချိန်မှာ - ချစ်သူများနေ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ရွှေလင်းယုန်မောင်နှံ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း ပြောခြင်ပါတယ်။
Read more: ရွှေလင်းယုန်မောင်နှံ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်း -...
May 2012, ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်ထုတ်စာစောင်
ဆရာဦးဇော်မင် & ချောမိ
အသက်ရှင်ခြင်းလက်္ခဏာ - ညီအစ်ကိုကြီးတင်မောင်ထွန်း
ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏သိုးထိန်း - ညီအစ်ကိုဦးတင်မောင်ညို
စုံစမ်းခြင်းအမျိုးမျိုးကိုအောင်မြင်၍ - ညီအစ်ကိုကြီးဦးကပ်ခန့်ခုပ်
၀ိညာဉ်အလင်းကိုရ၍ - ညီအစ်ကိုအက်လိုင်းမင်း
နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ကိုက်ညီသောအနာငြိမ်းခြင်း - ညီအစ်ကိုဇေန
Read more: May 2012, ဓမ္မပညာအထောက်အကူပြု လစဉ်ထုတ်စာစောင်
ငါသည်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏။ ယော ၁၅း၅
'ငါသည်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။ သင်တို့သည်အခက်များဖြစ်ကြ၏။ အကြင်သူသည်ငါ၌တည်၍ ငါသည်လည်း သူ၌တည်၏။ ထိုသူသည်များစွာသော အသီးကိုသီးတတ်၏။ ငါနှင့်ကွာလျှင်သင်တို့သည် အဘယ်အမှုကိုမျှမတတ်နိုင်ကြ။' (ယော၊ ၁၅း၅)
ယခင် သင်ခန်းစာ၌ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်၌ရှိခြင်း ဆိုင်ရာ အံ့ဘွယ်သစ္စာတရားတခုကို လေ့လာခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဒံထဲ၌ မရှိတော့ပါ၊ သို့သော် ခရစ်တော်၌ ရှိပြီး ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၌ ရှိခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင့်ရှေ့မှောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရပ်တည်ချက်(အဆင့်အတန်း)အသစ်၌ ရှိနေပြီး ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခရစ်တော်၌ စုံလင် လျက်ရှိသည်ကို မြင်တော်မူသည်။
Read more: ငါသည်စပျစ်နွယ်ပင်ဖြစ်၏။...
မုန်တိုင်းသုံးမျိုးမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရန် Freedom & Protection from Cyclone
ယေရမိ အနာဂါတ်တိကျမ်း 25; 31 - 33
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည်စုံပါစေလို့ ရှေးဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်နဲ့ အတူတကွ ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့လေးဟာ စင်ကာပူရောက်ရှိလာပြီးတော့ အခုလို ယုဒသန်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်အနေနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုဧည့်ခံတဲ့အတွက် ကျွန်တော့အနေနဲ့ အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။ ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ ၀မ်းမြောက်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ကျန်းမာခြင်း၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ချမ်းသားခြင်းများ အသင်းတော် ဥက္ကဌ၊ ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး၊ ဒုတိယ အတွင်းရေးမှူး၊ သင်းထောက်လူကြီးများနဲ့ အတူတကွ အသင်းသူအသင်းသား အယောက်တိုင်းအပေါ်တွင် သက်ရောက်ပါစေလို့လည်း ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သ အပ်ပါတယ်။ အခု ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင် နှုတ်ကပတ်တော်တရားကို မဝေငှခင် ကျွန်တော်နဲ့ ပါလာတဲ့အဖွဲ့လေးနဲ့ နည်းနည်းလေး ဂုဏ်တော်အားဖြင့် သူတို့ အရင်ချီးမွမ်းပါမယ်။ ချီးမွမ်းပြီးတဲ့အခါ နှုတ်ကပတ်တော်တရားကို အတူတကွ ခံယူကြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ (တရုပ်ဘာသာဖြင့် ဧည့်သည်များအား ဖိတ်ခေါ်ပါသည်)
Read more: မုန်တိုင်းသုံးမျိုးမှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခံရန်...
ဘ၀က ဤသို့ဖြစ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်မထားပါ။ ကျွန်မ စိတ်ကူးက ၁၉ နှစ်အရွယ်၌ အိမ်ထောင်ပြုပြီး ကလေး ၆ ယောက်မွေးကာ ဇနီးသည်အဖြစ်၊ မိခင်အဖြစ် ဘ၀ကို အခြေချချင်ခဲ့ သည်။ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်မလာဘဲ
Read more: ကျွန်ုပ်ကြံစည်သကဲ့သို့မဟုတ် - နေ့စဉ်ခွန်အား Our...
ခရစ်ယာန်လို့ အမည်တပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တို့ ယုံကြည်သူများဟာ ခရစ်တော်ကို အဓိကမထားတော့ဘူးဆိုရင် ခရစ်ယာန်ကောင်းတယောက် ဖြစ်ဖို့ရန် မလွယ်လှပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တယောက်ရဲ့ ဘ၀မှာ ခရစ်တော်မရှိတော့ဘူးဆိုရင် အဲဒီ ခရစ်ယာန်ဟာ ပဲ့မရှိတဲ့လှေ၊ စီးသူမရှိတဲ့ မြင်းလို အထိန်းအကွပ်မဲ့ ပရပမ်းပတာ ဆင်ကန်းတောတိုး
Read more: ခရစ်တော်ကိုသာ အဓိကထားလျင်